ABOn maaliif qabsoootti cicha? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABOn maaliif qabsoootti cicha?
ABOn qabsootti kan seene sirna cunqursaa jijjiiruuf. Yeroo jalqabaa san qabsoon karaa nagaa hin hayyamamu ture. Sababa kanaan ABOn hidhannoodhaan qabsootti seene. Gama kaaniin, haalli har’a jiruu fi bara qabsoon eegale ture waan walfakkaatuu fi wal hin fakkaanne ni qaba. Bara dur sanas har’as sirni cunqursaa ni jira. Garuu barri jijjiirameera. Haala ammaa kanatti hireen karaa nagaa qabsaa’uu argamee jira. Garuu caasaa fi sirni cunqursaa amma illee hin buqqaane.
ABOn egaa sababa kanaan, amma illee qabsootti cichee jira. Waanti jijjiirame, meeshaa ittiin qabsoofnuu dha. Dur hidhannoon malee karaa nagaa falmuun hin turre. Amma immoo haa xiqqaatu iyyuu malee, hireen karaa nagaa qabsaa’uu argamee jira. Sirnichi immoo amala isaa badaa san guutumamatti dhiisee hin jiru.
Akkuma yaadannu, cunqursaan amma illee ija baasee gaggeeffamee jira. Ummatni Oromoo amma illee cunqursaa jabaa jalatti argama. Caasaan mopotummaa marti meeshaa mootummaa fi paartii siyaasaa ta’ee ummata keenay gididrsaa jira. Waanti gidduu kana hoggantoota ABO irratti fudhatamaa jirus, haalli waansan hordofee adeemaa jirus kanuma jabeessa.
Poolisiin Oromiyaa ragaa fi hayyama mana murtii tokko malee, Oromoo hidhuun itti fufeera; hogganoota ABO shanan badii tokko malee namummaa irraa mulqanii hidhuun akkuam dur sanatti abbaa irrumaman raawwatee jira. Yeroo hogganoota hidhaman kana gadhiisanis, maaliif akka gadhiisan waan jedhan hin qaban. Ummanni keenya waan deemaa jiru beekuuf mirga guutuu qaba. Kan hidhaatti hafes, qabeenyi saamames maaliif akak ta’e waanti himame hin jiru. Namoota hidhaa jiran gaafachuuf deemanii hidhamuunis daran jabaatee itti fufee jira. Kunis deebii qajeelaa barbaada.
Gochaan mootummaa amma mul’atu, waan nuuf ibsu qaba. Barri jijjiramus, sirnichi amma illee kanuma durii ta’uu nutti agarsiisa. Kun immoo qabsoon Oromoo amma illee galii isaa gahuuf jabaatee akka itti fufu nu gaafata. Sirni Cunqursaa haga hin bannetti, qabsoon sirnicha diiguuf gaggeeffamu jabaatee itti fufuu qaba. ABOnis kanaaf qabsoo bilisummaa Oromoo kaleessaa jabeessee itti fufa. Meeshaan qabsoo jijjiiramus, qabsoon amma illee daandii ABO ti; galmi ABO immoo Bilisummaa Oromoo mirkaneessuu dha. Haga galmi sun mirkanaa’utti falmaan ABO yeroof illee hin boqotu!!
Dr Abiy Ahmed fi Alamuu simeetu Shira kana shire ragaa laali
Jawar Mohammed : Ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaa galgala kenne argeen jira. Ibsi sun paartii ABO yakkuuf akka godhame ifa. https://t.co/h5U2GI1Vrj pic.twitter.com/jnMvLpmOU4
— Kichuu (@kichuu24) March 8, 2020
“በኦሮሞ ህዝብ ስም ስልጣን የተቆጣጠረው ሃይል የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም እስካላስጠበቀ ድረስ በመጪው ምርጫ አንድም ድምፅ የማግኘት እድሉ የተመናመነ ነው፡፡”
አክቲቪስት ጀዋር መሓመድ
Dhugaa Baas says:
Murni habeshaan amma motummaa qabatee jirtu kanuma warriu abbotiisanii jecha turani nu jechaa jiru. Ergaan Abbiyy Amhmad Oromoof dabarsaa jiru, mirga abbaa biyyuummaa yoo ni barbaadu taate, qabsayaa kan jedhu dha.
የእሳት ጋዜጠኛ መሣይ መኮንን በተደጋጋሚ እኛ ህወሀትን ድጋፍ ባንከለክላቸው ኖሮ ኦሮሞ ወደ ሥልጣን አይመጣም ይል ነበር። የኦሮሞ መስዋዕትነት ያልበዛው ለዚህ ነው እያለን ነው። ስለዚህ የእነ ኢሳት ልጅ አብይ አመድ ኦሮሞን እያለ ያለው ሲሳይ መኮንን መልዕክት ልተግብር የሚል ነው። ይህም ማለት ኦሮሞ ነጻነቱን ማግኘት ከፈለገ በተጨማሪ መታገል አለበት የሚል ነው። ኦሮሞ ነጻነታችን በትግላችን ነው። ቅኝ ገዥ መንግስት ነፃነታችሁን እንኩ ብሎ የሰጠበት ታርክ የለም።